ifenisha komkhuba kokuhlanganisayo kancane kancane ziba ubala. Esikhundleni izindlela ezingaphezu yesimanje futhi functional, ezifana ifenisha ngamakheshi njengoba ukushaqeka ezidayiswayo.
Negesi ukushaqeka mfutho ifenisha esetshenziswa ukulinywa olungaphambili lwesonto iminyango ngasiphi isikhundla phezulu, phansi, engela noma lulwimi evulekile isimo Lesisemkhatsini. Kusukela zonke ezihlukahlukene ngamakheshi mechanical ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana igesi futhi imishini. Kuyinto igesi entwasahlobo ngoba ifenisha namuhla kwenzakala ngaphansi isibhamu. Sizokwenza ukuqonda izici butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela usebenzisa lezi amadivaysi kabanzi.
Kuyini isiphethu igesi?
Ngaphandle mshini ifana tube noma induku. Ngaphakathi umsebenzi indlela ekhethekile. I hermetically uphawu piston kufihlwe ikhamera actuation esebenzisa igesi engaxubani namakhemikhali. Njengoba gas nitrogen engena akuphazamisi gasket iraba futhi ubangela ukugqwala izinqubo.
Izinhlobo ifenisha dampers
Kunezinhlobo ezimbili zama-gas ngamakheshi:
Negesi lift abasebenza induku kokucindezelwa - damper yesenzo oqondile.
Negesi lift abasebenza isandiso induku eyaphenduka uku lalihlehliswa isimo - ukushaqeka reverse senzo.
Iqembu lokuqala amadivayisi kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe ekuklanyweni ifenisha.
Izici igesi ukushaqeka wezinciphisi uvumele ukukhiqizwa ukufaka nabo amabanga ehlukene, nakho kwenza kube nokwenzeka ukuba ngivule iminyango engela ahlukene.
Izici igesi ukushaqeka wezinciphisi
Kanye mechanical, igesi ukushaqeka wezinciphisi zenziwa metal - steel eqinile futhi iqine. Amadivayisi anjalo asetshenziselwa obandayo mbumbulu yanoma yimuphi isisindo, konke okudingeka ukwenze - eyolanda umkhiqizo ne sibalo umthwalo entwasahlobo igesi ifenisha. Ukukhweza olungaphambili lwesonto, uzodinga ukuthenga ngamakheshi amabili. izindlela ezinjalo kuphela ukuthenga isethi: kumele lifane bona, ngaphandle kwalokho umnyango angase ehle, okuholela ukungasebenzi futhi kwadala umonakalo ambulensi.
Le mikhiqizo zinezikhathi eziphansi, lula ukusetshenziswa kanye kalula ukufakwa. Ukuze uhlobo olungaphambili lwesonto ngalinye umshini ekhethekile ukuthi kufanelekile kuye yi-degree of ukucindezeleka. Negesi entwasahlobo ifenisha, ngaphandle bushelelezi, ihlinzeka ukuvulwa egcwele iminyango iKhabhinethi, enikeza umsebenzisi ukufinyelela okugcwele eshalofini.
Ngu ukuhlangana leli thuluzi ukuze eydijithali ne dryer ehlanganyele izitsha, ungakwazi kalula futhi kahle ubeke amapuleti eshalofini, futhi umnyango ngeke zisaba ukukuhlupha.
Negesi ukushaqeka wezinciphisi zimi kahle zilungele ekhishini ifenisha. Ukufaka entwasahlobo igesi ifenisha - enkulu kulabo izimpi futhi iminyango eminingi evame wavula futhi ivaliwe. Ilungiselelo elinjalo kuqinisekisa ukusebenza abushelelezi umnyango futhi ngokulingana okuphephile.
Ifenisha igesi lift - indlela evamile for axube iminyango emzimbeni.
Umgomo we operation ye lift igesi
I piston kuhlanganisa ikamelo zokusebenza (isilinda), ngomshikisho amabombo nezimpawu. Le ndlela yokwakha yenza unhlangothi abushelelezi isikhala uphawu. Yakha ayinika ukuzinza-piston emikhonweni ngedivayisi zichichima valve. I iziphethu babe Damping (damper) senzo.
Lapho uvula iminyango piston bephushelwa maqondana ngaphandle yi-gas, lapho ukuvala - efihla libuyiselwa piston. Ukugibela Smooth kuqinisekiswa i damper uwoyela. Umgomo we operation sedivayisi enjalo kungenxa zichichima lamafutha Lubrication komunye gumbi kwesinye, ukuthi kwenza abantu bakuphathe umphumela ukushaqeka abaningi. Yileyo damper uwoyela unesibopho ukuzinza umnyango kule sikhundla evulekile. Le yunithi ithumba olungaphambili lwesonto ngokwawo yisiphi isimo evulekile, kungekho isidingo ubamba umnyango - it is ngokuphepha ilungiswe isimo lapho kukhona okwamanje.
Ukubalwa umthwalo entwasahlobo igesi
Ukubalwa igesi dampers wenziwa ifenisha, okusekelwe ubukhulu olungaphambili lwesonto. Umthwalo phezu lift igesi ulinganiswa Newtons. Ezimakethe ungathenga igesi ukushaqeka wezinciphisi kuleli zinga:
Thatha indlela ukusiza umxhumanisi umakhenikha noma nethebula ezibukwayo umkhondo iklayenti, elibonisa izici eziyinhloko nomthwalo amakhono.
Imakethe elimhlophe, dampers omnyama steel igesi ifenisha, intengo zazo kuhluka ruble angu-50 laya ku-800, futhi kuncike umthamo we mfutho ukushaqeka.
Isimiso zenhlangano igesi lift
Sibheka indlela ukufaka igesi entwasahlobo ngoba ifenisha. Ngaphambi kokuqala umsebenzi, ukulungiselela impahla edingekayo:
- a ukufakwa kokumqoka kuphela noma ukufakwa kokumqoka kuphela;
- igesi entwasahlobo.
Mark maphakathi obandayo uhlangothi: hlola 25 mm ukusuka ekugcineni engenhla futhi 25 - kusukela front end kusukela front.
Okubalulekile! Khumbula ukuthi ubukhulu ekhonjiswe ngaphakathi indiza mojuli.
Phina ifomu uhlangothi ku okuyinto wagibela piston igesi damper.
Okubalulekile! Qinisekisa ukuthi lwemidlalo kuvumelana uphawu isikhungo olenzile.
Namathisela iso ingxenye ezihambayo ukuphakamisa.
Bopha esinanyathiselwe olungaphambili lwesonto.
Yenza ukubala ngezikulufo kanye isikulufa emuva yasibamba elementi lift igesi, ungakhohlwa ukuba Orient entwasahlobo igesi wesifunda.
Umehluko igesi ngamakheshi kanye nezinzuzo phezulu kwezinye iziqobosho
Njengoba igesi esetshenziswa - nitrogen - akunamthelela emibi timphawu tesakhiwo.
Negesi ukushaqeka mfutho ogibele iyiphi olungaphambili lwesonto. Ngakho, ngisho ifenisha ezishibhile kungenziwa siguqulelwa iphakheji obusebenzayo futhi kulula ukuyisebenzisa.
isevisi eside ekuphileni kuqhathaniswa ejwayelekile ifenisha kokuhlanganisayo.
A ezahlukene imikhiqizo kanye inani elikhulu ukumelana imithwalo elikuvumela ukuba kalula ukhethe model kwesokudla lift for olungaphambili lwesonto.
Wide lokushisa ububanzi evumela ukusetshenziswa ngamakheshi ezinjalo, kungakhathaliseki sezulu zasendlini.
Ngenxa izinto ezisetshenziselwa amadivayisi yokukhiqiza abe ezingeni eliphezulu ukuzinza nokwethembeka.
Negesi entwasahlobo - okunye okukhulu izindlela esezingeni yasibamba mbumbulu. Nedivaysi ezinjalo, noma iyiphi ifenisha ngeke usebenze ngokushelela, ngaphandle okubangela ukukhathazeka kumniniyo, akusiwona nje amazwi - kuyiqiniso. Izibuyekezo zabantu abasebenzisa lezi amadivaysi ukuqinisekisa izinzuzo ngenhla washo igesi ngamakheshi. Abathengi aveze ukuthi zingabantu okuhlala kanye esitebeleni, futhi uma ihlukana, le lula esikhundleni.
Nge nensada ezinjalo iziphakamiso ifenisha, ukuthenga Zaporozhye ifenisha, futhi, kungaba inkinga
Imililo ezindlebeni. Okufanele ukwenze uma kwenzeka lesi simanga?